सफल हुनलार्इ दिमागबाट सधैंलाई हटाउनुहोस्, यी पाँच कुरालाई::Radio Chhahari
सफल हुनलार्इ दिमागबाट सधैंलाई हटाउनुहोस्, यी पाँच कुरालाई
मङ्लबार, कार्तिक ६, २०७५
काठमाण्डु–समस्या हरेक मान्छेको जीवनमा आउने गर्छ । जब एउटा समस्याको तपाईं हल गर्नुहुन्छ लगत्तै अर्काे ढोका ढकढकाउन आइपुगेको हुन्छ । त्यसकारण समस्याको अनतय कहिल्यै पनि हुँदैन ।
जब हामी कुनै सफल व्यक्तिलाई देख्छौं हामीलाइृ लाग्छ यो मान्छे भाग्यमानी रहेछ, यसले सजिलै सफलता हासिल ग¥यो । तर, हामीले सफल देखेका ती मान्छेले हाम्राभन्दा ठूला समस्या झेलेर नै सफल भएका हुन् तर उनीहरुको समस्यालाइृ हल गर्न तरिका भने अलग थियो ।
तपाई पनि दिमागमा यी पाँच कुरा नखेलाउनुहोस् सफलता तपाईको दैलोमै हाजिर हुन्छ ।
१, बाहिर मान्छेले के सोच्छन् भनेर चिन्ता नलिनुहोस् : यस दुनियामा हरेक व्यक्तिले आफ्नै मर्जीले मात्र नभइ अरुको देखेर प्रभावित भएर पनि काम गर्ने गर्दछन् । जब तपाई केही गर्न थाल्नुहुन्छ र त्यसका बारेमा आम मानिसहरुले के भन्लान् भनेर सोच्न थाल्नुहुन्छ भने तपाईं सफल हुनुहुन्न । त्यसैले तपाईंले आफूलाइृ मनमा लागेको काम गर्नुहोस् अरुको बारेमा दिमागमा ठाउँ नै नराख्नूस् ।
२ डर: डरको कुरा गर्न हो भने हामी कल्पनाभन्दा घेरै केही होइनौं । तपाईले कुनै पनि काम गर्दा जोखिम मोल्न डराउनु भयो भने सफलता तपाईभन्दा टाढा भाग्छ । त्यसैले डर भन्ने शब्दलाई पनि हाफ्नो दिमागबाट हटाउनुहोस् ।
३, बितेको समय र भविष्यको बारेमा चिन्ता नलिनूस्
हामीमध्य धेरैजसो मानिसले भविष्य के होला भनेर चिन्ता गर्ने गर्छाैं । बितेको समय सम्झेर पनि त्यस्तै गर्छौ । त्यसले हाम्रो वर्तमान बिगारी रहेको हुनछ । त्यसैले वर्तमानमा काम गर्नूस् भूत र भविष्यको कल्पना गरेर नबस्नूस् ।
४, नकरात्मक सोचाइलाई हटाउनूस: नकरातमक सोचाइ यस्तो घात चीज हो कि यसले हामे शक्तिलाई नास गर्दछ । जब हाम िकुनै काम गर्न खोजछौं पहिले नै म त यो सक्दिन भन्न थाल्यौं भने हामी कहिल्यै त्यो काम गर्न सक्दैनौं । त्यसैले सकरात्मक सोचको विकास गरौं ।
५, उमेरको ख्याल नगनूस: तपाईलाई लाग्न सक्छ उमेर एक सख्याको नाम हो । सफल व्यक्तिले आफ्नो उमेरको ख्याल नै गर्दैन् । त्यसैकारण कतिपय व्यक्तिले कलिलै उमेरमा पनि सफलता पाएका हुनछन् । तपाई पनि उमेरलाई दिमागमा नल्याउनूस् त्यसले तपाईंलाई कि म कलिलै छु कि म बूढो भइसके जस्ता हीनता ग्रनथी भरिदिने काम गर्छ ।
यी पाँच कुरालाई दिमागमा ल्याउनुभएन भने तपाईं अवश्य सफल हुनुहुने छ ।
चर्चित गायक पशुपति शर्माले ९ नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको गित लाई किन हटाए आतिदै लुट्न सके लुट कान्छा
किन हट्यो पशुपती शर्माको ‘लुट्न सके लुट् कान्छा’ युट्युबबाट यस्ताे छ शर्माकाे फेसबुक स्टाटस
शिव हमालको लय शब्दमा सन्दिप न्यौपानेको बहुप्रतिक्षीत लोक दोहोरी गीत लालुमै छोटो समयमै चर्चाको शिखरमा
रेडियो छहारी डट कम काठमाडौं चर्चित लोक दोहोरि गायक
आदरणीय श्रोता एवं दर्शकवृन्द साथै मेरा प्यारा शुभचिन्तक
लोकप्रीय गायक सर्जक एवम् संगीकार शिव हमालको पछिल्लो
दोलखाली गायक अशिम कुमार कटुवालको लय तथा शब्द सृजनामाअविरल तामांग र सोनी तामांगको ठुली बजारमा
रेडियो छहारी डट कम काठमाडौं फागुन ३ दोलखाली गायक अशिम
बिष्णु पौडेल निरिसको भ्यालेनटाईन डे गीत बजारमा, पुर्णिामा लामा र के. बि. लामाले गुलाफ साटासाट गरे
प्रेम दिवसको अबसर पारेर अहिले प्रेम दिवस बिशेष
प्रथम बलेवा महाेत्सवमा महानायक राजेश हमाल संगै चर्चिच कलाकारकाे जमघट
बागलुङ शिक्षा खेलकुद कला संस्कृतीकाे पहिचान,बलेवाकाे विकास र प्रवर्दनमा
प्रेम दिवसकाे अवसरमा ‘दिलको भतेर’ (भिडियो)
काठमाडौं । प्रेम दिवस नजिकिदै गर्दा बजारमा प्रेम दिवस
फाल्गुण २ गते देखि प्रथम बलेवा महाेत्सव हुँदै
बागलुङ शिक्षा खेलकुद कला संस्कृतीकाे पहिचान, बलेवाकाे विकास र
बिस्वासको नयाँ गीत ‘ब्यांग ब्यांग’ बजारमा
रेडियो छहारी डटकम माघ २८काठमाडौं काठमाडौं । विगत लामो समय
गजल – कवि काफ्ले (दोलखा)
साँझ मरेको थियो बिहान उठेर आयो कस्तो अचम्म अहो